Ukusungulwa Kwezesayensi Nezobuchwepheshe Base-Australia | Ukuhamba kwe-Absolut
Luis Martinez | 20/04/2021 09:32 | Kubuyekezwe ku- 20/04/2021 10:34 | Australia
Azikho izinto eziningi zesayensi nezobuchwepheshe zase-Australia njengalezo ezitholwe kwamanye amazwe omhlaba. Isizathu silula: Australia yizwe mncane kakhulu futhi, kalula nje, asizange sibe nesikhathi sokugcizelela kakhulu kule mikhakha.
Kodwa-ke, izwe lasolwandle selivele lisinikeze ingxenye yalo efanelekile yokutholile. Futhi, ngaphezu kwakho konke, kwe ukubaluleka okukhulu kwesayensi futhi ithandwa kakhulu ngokwamasu. Uma ufuna ukwazi kabanzi ngokuqanjwa kwesayensi nobuchwepheshe base-Australia, sikumema ukuthi uqhubeke ufunde.
1 Ukuqanjwa okuyisisekelo kwe-Australia kwezesayensi nezobuchwepheshe
1.1 Ukutholwa Kwezesayensi Kwase-Australia
1.1.1 Ukusetshenziswa kwe-penicillin
1.1.2 Umenzi wenhliziyo
1.1.3 Umuthi Wokugoma Womuntu Papilloma
1.1.4 Ukufakwa kwe-cochlear
1.1.5 Isithwebuli se-ultrasound
1.1.6 Ukongiwa kwemvelo ngamakhorali
1.2 Ukuqanjwa kobuchwepheshe base-Australia
1.2.2 Ibhokisi elimnyama lezindiza
1.2.3 I-google maps
1.2.4 I-drill kagesi
Ukuqanjwa okuyisisekelo kwe-Australia kwezesayensi nezobuchwepheshe
Njengoba sikutshelile, sekuvele kunenqwaba yokutholakele okwenziwe ngabantu base-Australia. Ngalesi sizathu, nokwenza ukucaciswa kwethu kucace bha, sizokhuluma kuqala ngezinto ezibaluleke kakhulu kwisayensi bese kuthi ezinye ezibaluleke kakhulu kwezobuchwepheshe.
Ukutholwa Kwezesayensi Kwase-Australia
Ngokuphathelene nalokhu, izinto ezisungulwe e-Australia zisizile i- Impilo yomuntu (njengoba sizobona ngokushesha, zihlobene ngisho nepenicillin) kanye no imvelo. Okunye kwalokhu okutholakele yilokhu esizokuchazela kona.
Wonke umuntu uyazi ukuthi i-penicillin yatholakala kumaBrithani U-Alexander Fleming ngo-1928. Kodwa-ke, okwaziwa kancane kakhulu ukuthi babengama-Australia UWoward W. Florey nesiJalimane U-Ernst B. Chain ngubani owaklama indlela yokwenziwa kwayo ngobuningi, into engagcina isindise izigidi zabantu. Eqinisweni, lapho uFleming ethola i- Umklomelo weNobel ngo-1945, wakwenza kanye nalaba asebenza nabo ababili.
Uqwembe lokuhlonipha u-Ernst B. Chain
Leli thuluzi lezokwelapha livumela iziguli zenhliziyo ukuthi zigcine ezazo ngokushaya njalo. Ithumela ukushaqeka okuncane kukagesi esithombeni ukuyisiza yenze kanjalo. Yasungulwa yi-physicist Idokodo lika-Edgar nodokotela UMarc Lidwill, bobabili base-Australia, emuva ngawo-1920. Nokho, ukusetshenziswa kwayo akuzange kujwayelekile kuze kube ngawo-XNUMX.
Umuthi Wokugoma Womuntu Papilloma
Yize abanye ochwepheshe bangenelela, lo muthi wokugoma uphakathi kwezinto ezisungulwe yisayensi nezobuchwepheshe e-Australia ngokwazo. Kwakungabafundi ababili abavela eNyuvesi yaseQueensland, U-Ian Fraser y UJian Zhou, okwazile ukudala inhlayiya efana naleli gciwane eyaqinisa amasosha omzimba ekulweni nayo.
Lo mshini usize amakhulu ezinkulungwane zabantu abayizithulu ukuba bathuthukise ukuzwa kwabo. Ifakwe ekhanda futhi ikwazi ukuvuselela imizwa yokuzwa. Bekuyi UGraeme Clark, uprofesa wase-University of Melbourne, owasungula yona. Uyise wahlushwa ukuzwa, kwathi ngenkathi ezama ukumsiza, wathola leli thuluzi eliwusizo kakhulu.
Leli thuluzi lezokwelapha elisetshenziswa namuhla ukwenza i-ultrasound Yakhiwa yi-Australian Commonwealth Acoustics Laboratory, kamuva eyabizwa kabusha ngokunembile Isikhungo se-Ultrasound. Abasunguli bayo bathole indlela yokubamba ama-echoes e-ultrasonic abopha izicubu zomzimba wethu futhi aziguqule zibe izithombe. Ukuhweba kwayo kwaqala ngo-1976.
Ukongiwa kwemvelo ngamakhorali
Njengoba wazi, i IGreat Barriers Reef kusenyakatho-mpumalanga ye-Australia. Kunamakhilomitha angaphezu kwezinkulungwane ezimbili namakhulu amahlanu esakhiwo esikhulu samanzi esisengcupheni njengamanje. Mhlawumbe yingakho abase-Australia bebelokhu behamba phambili ku I-oceanography.
El Isikhungo sase-Australia Sesayensi Yasolwandle ithuthukisa amaphrojekthi amaningi wokugcina imvelo. Phakathi kokuvelele kakhulu kunalokho okunikezelwe ku- ukulawulwa kokulima kwamakhorali. Inhloso yawo ukubuyisela imifula esimweni sayo semvelo. Ngokulandelayo, lezi yizinto eziphilayo ezifaka isandla ku- ibhalansi yemvelo olwandle nokuzivikela emiphumeleni ushintsho lwesimo sezulu oluba nayo kuzo.
Ukuqanjwa kobuchwepheshe base-Australia
Okusungulwe kakhulu kwezobuchwepheshe e-Australia ngokungangabazeki i- i-wifi, esizokhuluma ngayo ngokulandelayo. Kepha kukhona abanye futhi abasebenzise ukuthuthukisa ukuphepha emoyeni noma ngezinye izinhloso ezihlukile. Ake sizibone.
Ukuxhumeka okungenantambo kwi-Intanethi kuzosiza ekusetshenzisweni kwalokhu emakhaya nasemahhovisi. Ithuluzi eliwusizo elinjalo libangelwa usosayensi wase-Australia UJohn O'Sullivan nethimba lakhe labasebenzisana noSidney. Bonke babengabakwa-CSIRO, umzimba we Commonwealth Kunikezelwe ekuthuthukiseni ucwaningo lwesayensi nobuchwepheshe.
Ibhokisi elimnyama lezindiza
Njengoba wazi, leli thuluzi elifakwe ezindizeni emhlabeni wonke namuhla lisetshenziselwa ukuthola ukuthi kwenzekani endizeni ngezikhathi ezingaphambi kwengozi. Zonke izingxoxo zomshayeli wendiza kanye nemingcele yendiza ziqoshwe kuyo, nayo engenakonakala. Umsunguli wayo kwakungu-Australia UDavid warren, owayelahlekelwe ngubaba wakhe engozini yendiza.
Akuwona ukuphela komnikelo wezwe lasolwandle ekuphepheni kwezindiza. Ngo-1965, UJack Grant, isisebenzi senkampani yezindiza iQuantas, sidale i- slayida izimo eziphuthumayo. Isetshenziselwa ukwehlisa abagibeli ngemuva kokufika kabi.
Yize kungazange kubizwe kanjalo ngaleso sikhathi, leli thuluzi eliwusizo kakhulu lakhiwa ngokwengxenye ngabase-Australia UStephen Ma y UNeil Gordon eceleni kukaDanes Lars noJens Rasmussen ekuqaleni kwawo-XNUMX. Kamuva, lapho okusungulwayo kuthengwa iGoogle, lapho yathola khona igama layo lamanje.
Ibhokisi elimnyama lendiza
Uma uthanda i-DIY, uzokwazi ukuthi leli thuluzi lenza kanjani umsebenzi wakho ube lula. Yebo, futhi kusungulwe e-Australia. Kulokhu, kungenxa konjiniyela kagesi U-Arthur James, owenze owokuqala emuva kwangowe-1889. Yiqiniso, ngaleso sikhathi, wawungaphatheki, kepha wawumkhulu kakhulu. Kodwa-ke, yayikwazi ukubhoboza ngisho namatshe.
Ifriji yendabuko namuhla ebonakala ibalulekile emakhaya ethu cishe ineminyaka eyikhulu namashumi amahlanu ubudala. Lapho ingekho, ukudla kwakugcinwa ezindaweni ezipholile emakhaya. Ngokuthakazelisayo, kwakungabaphathi benkampani ekhiqiza utshwala e-Australia ababeqasha UJames Harrison ukuxazulula izinkinga zokongiwa kwesiphuzo sakhe ngo-1856.
Sengiphetha, sikubonise ezinye zefayili ye- Ukuqanjwa kwesayensi nezobuchwepheshe e-Australia. Njengoba ukwazi ukubona, ukunikela kwezwe lasolwandle ekuthuthukiseni ubuntu bekungaphezu kokuthakazelisa futhi, ngaphezu kwakho konke, kubalulekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Ukuqanjwa kwesayensi nezobuchwepheshe e-Australia
i-ana mercedes villalba G. kusho
Lokho abakushoyo noma abakuchazayo kuhle kakhulu
Phendula ku-ana mercedes villalba G.
Yiziphi izinkampani ezinkulu zase-Australia?